Yan Aung: နှစ်ကိုယ်မခွဲဖြစ်တော့တဲ့ လမ်းဆုံ...
ဒိုင်က “ရွှီ” ခနဲ ခရာမှုတ်လိုက်တာနဲ့ မီးခြစ်ကိုခြစ်၊ ဖယောင်းတိုင်ကို မီးထွန်း၊ ပြီးတာနဲ့ ကျန်တဲ့လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့ ဖယောင်းတိုင် မီးမငြိမ်းအောင် ကာပြီး ပြေးရတဲ့ ကစားနည်းလေးတစ်ခုပါ.
အစ်ကိုရေ တွေးစရာတွေအများကြီးရသွားပါတယ်။ အစ်ကို့ကိုကျေးဇူးပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုကစားနည်းတွေ ကစားခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုလိုမျိုးတော့ ပြန်မတွေးကြည့်မိဖူးဘူး။
အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွေးကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ တကယ်ဖတ်လို့ ကောင်းပါ
မှတ်သားစရာကောင်းပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးဘဲ ကိုရန်ရေ...
သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့ စ်ပါ..။
အကိုရေးသမျှညီ လာလာဖတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်အကို က ညီ တောင်းဆိုတဲ့ blog မှာ Read more ဆို ပြီး ထည်တာကို မထည့်တတ်လို့ ရေးပေးပါဆို တာ ကို ၊ အကို က ဥပက္ခာပြုထားတယ်နော် ။ ရက်ဆက်တယ် ။ အဟင့်
အကိုကြီး..ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလည်း အကိုပြောတဲ့ ကစားပွဲလေးတွေကို ကစားခဲ့ဘူးတယ်. နိုင်တဲ့အခါ ရှိသလို ရှုံးတဲ့အခါတွေလည်း ရှိခဲ့တာပေါ့။ အခု အသက်အရွယ်လေးရလာတော့ ငယ်ငယ်က ကစားနည်းလေးတွေကို ငါနဲ့ မဆိုင်တော့ပါလားဆိုပြီး အမှတ်တမဲ့ပဲ နေခဲ့မိတယ်. အခု အကို စဉ်းစားသွားတာလေး. တွေးခေါ်သွားတာလေး ဖတ်လိုက်ရမှ တစ်ကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပွဲလေးတွေမှန်းသိရတော့တယ်။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်တတ်တဲ့ အကိုကြီး အောင်မြင်မှုတွေရဦးမှာပါ
ကစားပွဲလေးတွေကို ဘဝနဲ့ယှဉ် လေးလေးနက်နက် တွေးကြည့်ပြီး အမှားအမှန်လေးတွေ မြင်သာအောင် ရေးထားတာ တကယ်ကို ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ကိုရန်ရေ။